घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » स्वास्थ्य समाचार » अनुचित COVID फोहोर ब्यवस्थापनले भाइरसको फैलावट बढाउन सक्छ
स्वास्थ्य समाचार • समाचार • सुरक्षा • थाईल्याण्ड ब्रेकि News न्युज • पर्यटन • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
COVID फोहर व्यवस्थापन
फोहर ब्यवस्थापन मा कोभिड -१ pandemic महामारी को प्रभाव मा अमेरिका मा जैव प्रौद्योगिकी सूचना (NCBI) अमेरिका मा गरिएको अध्ययन मा।
कोभिड 19१ pandemic महामारीले वायु प्रदूषण र वातावरण सम्बन्धी आवाज र जैविक विविधता र पर्यटन स्थलहरुमा सुधार ल्याएको बताइएको छ।
तर घरमै बस्न र फोहोर ब्यवस्थापन मा रोकथाम को उपाय को प्रभाव चिन्ताजनक छ।
स्वास्थ्य सुविधा र घरहरु बाट उत्पन्न फोहोर को उचित व्यवस्थापन गर्न को लागी असफलता COVID-19 को फैलावट बढ्न सक्छ।
पन्जा, गाउन, मास्क, र अन्य सुरक्षात्मक कपडा र उपकरणहरु को भण्डारण को कारण, त्यहाँ दुबै घर र स्वास्थ्य सुविधाहरु बाट फोहोर को असामान्य उत्पादन को कारण एक बर्बाद आपतकालिन देखिन्छ। स्वास्थ्य सुविधाहरु र घरहरु बाट उत्पन्न फोहोर को उचित व्यवस्थापन गर्न असफलता बढ्न सक्छ कोभिड -१ of को प्रसारण माध्यमिक प्रसारण को माध्यम बाट.
सम्भावित ब्यापक डम्पि,, खुला जलाउने, र भस्म गर्न को लागी विष को लागी जोखिम को कारण वायु गुणस्तर र स्वास्थ्य परिणामहरु लाई असर गर्न सक्छ। यसरी, त्यहाँ प्रदूषण घटाउने, माध्यमिक भाइरल प्रसारण को रोकथाम, र सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम लाई कम गर्ने क्रममा उपलब्ध फोहोर सुविधाहरु को उपयोग गरी दिगो रुपमा असामान्य फोहोर को ब्यवस्थापन को चुनौती छ।
Hazmat अपशिष्ट सजीलै पट्टया मा सजीलो निपटान को लागी रातो झोला मा अलग गरीएको छ।
पटाया खतरनाक COVID-19 फोहोर को थुप्रो मा डुबेर
लगभग २०,००० पटाया बासिन्दाहरु या त अस्पताल मा वा घर अलगाव मा, शहर को खतरनाक फोहर समस्या कोरोनाभाइरस को मामलाहरु भन्दा छिटो बढ्दै छ।
उपमेयर मेनोटे नोंग्याईले भने कि दिन मा7टन भन्दा बढी मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक गियर, टिश्यु, र बिरामीहरु द्वारा प्रयोग गरिएको अधिक सांसारिक फोहोर अब थुपारिएको छ। यो मात्र 800०० किलोग्राम हज्मत रद्दीटोकरी संग तुलना गर्दछ कोरोनाभाइरस तेस्रो छाल Chonburi मा विस्फोट हुनु भन्दा पहिले।
Pileup को लागी2प्रमुख कारणहरु छन्। पहिलो मानिसहरुको संख्या हो अब केहि चिकित्सा हेरचाह वा संगरोध को रूप मा: १,, 18,942 ४२ बुधवार को रूप मा सबै Chonburi मा। प्रान्तले 974 147 ४ नयाँ मामिलाहरु पनि रिपोर्ट गरेको छ, जसमा बंगलामुung जिल्लामा १४XNUMX जना छन् पटाया सामेल छन्.
दोस्रो कारण जोसिलो मानक हो कि सरकारले केहि "हज़मत" को रूपमा वर्गीकृत गर्न को लागी प्रयोग गरीरहेको छ। सामान्यतया, कोभिड -१ for को लागी सकारात्मक परिक्षण गरेको व्यक्ति द्वारा छुने कुनै पनि कुरा-चाहे ती लक्षण होस् वा नहोस्-रातो प्लास्टिक मा झोला र विशेष गरी ह्यान्डल र डिस्पोजल गर्न को लागी आवश्यक छ। त्यो तातो चटनी को बोतल वा कागज को एक टुक्रा को रूप मा यस्तो सांसारिक वस्तुहरु सामेल छन्।
ती रातो झोलाहरुको डिस्पोजल को लागत पर्याप्त छ। पटायाको फोहोर ढुवानी, पूर्वी ग्रीन वर्ल्ड कं, सामान्य रद्दीटोकरी को लागी १.५ baht प्रति किलोग्राम चार्ज गर्दछ। संक्रामक फोहोर, तथापि, हटाउन को लागी एक किलोग्राम 1.5 baht लागत।
यसले "होस्पिटेल" को नेतृत्व गरेको छ-रूपान्तरित होटलहरु जो हल्का बिरामी कोरोनाभाइरस बिरामीहरुको हेरचाह गरिरहेका छन्-फीस तिर्ने बतख लाई आफ्नो फोहोर भेस गर्न। चोलचन पटाया बीच रिसोर्ट यस महिनाको शुरुमा कालो नियमित रद्दीटोकरीको झोलामा रातो हजमत झोलाहरु लपेटिएको थियो।
मानोटेले भने कि पटायाले पूर्वी ग्रीन वर्ल्ड को उपयोग गर्नुको सट्टा यसको हज्मत संग्रह आउटसोर्स गरेको थियो, तर त्यो अज्ञात फर्म रातो झोलाको बढ्दो ज्वार संगै रहन असमर्थ थियो। तेसैले पूर्वी ग्रीन वर्ल्डका कर्मचारीहरुलाई खतरनाक फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तालिम दिइयो ताकि उनीहरु पनि कोरोनाभाइरसको फोहोर हटाउन सक्दछन्।
Manote यो महत्वपूर्ण छ कि सबै hazmat झोला एक हप्ता भित्र स collected्कलन गरिन्छ, त्यसैले यो एक भन्दा बढी कम्पनीहरु यो गर्न को लागी लिन्छन्।
उपमेयरले यो पनि जोड दिनुभयो कि फोहोर छान्ने मा जनता लाई धेरै सजग हुन को लागी ताकि क्वारेन्टाइन वा घर को अलगाव मा जो कोहीले पनि रातो हजमत झोला को उपयोग गर्दछन्।